Bit By Bit - imibuzo Ukubuza - 3.3.3 Cost
Surveys akuzona free, futhi lokhu ngilo real.
Kuze kube manje, ngiye sibuyekezwe kafushane Imininingwane kohlaka iphutha inhlolovo, okuyinto ngokwayo kungaphansi ncwadi ubude zokwelapha (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Nakuba lokhu uhlaka kuyinto olunzulu, it ngokuvamile kubangela abacwaningi okumelwe uyishiye esibalulekile: izindleko. Nakuba izindleko-ezingasetshenziswa kulinganiswe kungaba isikhathi noma imali-kuyaqabukela kucaciswa kuxoxwa ngokokukhetha kwabacwaningi academic, kuba ngilo real ukuthi asinaki babezifaka engozini enkulu yethu. Eqinisweni, amasampula isizathu abacwaningi interview labantu kunokuba wonke labantu imali. Ngakho, izindleko luyisisekelo inqubo yocwaningo inhlolovo (Groves 2004) . A ukuzinikela egxilile kuya ukunciphisa iphutha ngenkathi izindleko bezishaya indiva ngokuphelele akusilo njalo ku isithakazelo sethu best.
I ukulinganiselwa ngokweqile ekunciphiseni iphutha zikhonjiswe nge cwaningo oyingqophamlando ka Scott Keeter kanye nozakwabo (2000) ngemiphumela ezibizayo yasendle imisebenzi ukuze kuncishiswe non-Ukusabela vo zocingo. Keeter kanye nozakwabo wagijima survey ezimbili kanyekanye, omunye usebenzisa "Standard" izinqubo kanye nalowo nokusebenzisa inqubo "okunzima". Nakuba izinqubo "okunzima" awaveza a rate engezansi non-Ukusabela, ezakhishwa amasampula bobabili iyefana. Nokho, izinqubo "okunzima" kubiza kalukhuni kabili futhi wathatha kasi- 8 inqobo. Ingabe singcono nge 2 survey kunengqondo noma 1 inhlolovo acwebile? Kuthiwani 10 survey kunengqondo noma 1 inhlolovo acwebile? Kuthiwani 100 survey kunengqondo noma 1 inhlolovo acwebile? Esikhathini esithile izinzuzo izindleko kumele kudlule engacacile, ukukhathazeka non-ethize mayelana quality.
Abaningi amathuba adalwe yobudala digital akuzona mayelana nokwakha tilinganiso ukuthi kusobala ukuthi iphutha aphansi. Kunalokho, lezi amathuba mayelana nokwakha tilinganiso eshibhile futhi ngokushesha, kodwa mhlawumbe nge amaphutha njengamanje ephakeme noma kunzima kakhulu ukulinganisa. Njengoba abaningi izibonelo kulesi sahluko sizobonisa, abacwaningi abaphikelela kukhathazeka egxilile nge ukunciphisa iphutha ngezithukuthuku nezinye izilinganiso izinga bazoya uphuthelwe amathuba avusa amadlingozi. Sazi lokhu ngesizinda Imininingwane kohlaka iphutha inhlolovo, sizokwenza Manje phenya izici ezintathu eziyinhloko kwenkathi sesithathu yocwaningo inhlolovo: izindlela ezintsha ukumelwa (Isigaba 3.4), izindlela ezintsha nesilinganiso (Isigaba 3.5), kanye amasu amasha esihlanganisa survey enokulandelela digital (Isigaba 3.6).